Qorshaha Diyaar-garowga Doorashada Madaxtooyada Ee Komiishanka..
Qorshaha Diyaar-garowga Doorashada Madaxtooyada Ee Komiishanka
Hargeysa (Dhamays) – Guddiga Doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa xaruntooda magaalada Hargeysa kulan kula yeeshay shir-guddoonada Goleyaasha Sharci-dejinta ee Guurtida iyo Wakiiladda.
Kulankan oo ah kii ugu horreeyay ee Guddiga Doorashooyinka Qaranku la yeeshaan Shir-guddoonka Guurtida iyo Wakiiladda, ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan toddobada xubnood ee Guddiga Doorashooyinku ka kooban yihiin, halka Shirguddoonka Golaha Wakiilada na ay ahaayeen Guddoomiye Ku xigeenka koowaad iyo Labaad iyo waliba guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Guurtida.
Sidaana waxa lagu caddeeyey War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka Qaranka Maanta, kaasi oo u qornaa sidan “Furitaan ka dib waxa warbixin kooban ka jeedisay goobta Kaltuun Sheekh Xasan oo ka mid ah Guddiga Doorashooyinka, iyada oo ka hadashay arrimo dhawr ah:-
In komishanku ugu horreyn tijaabiyay qorshihii diiwaan galinta codbixiyaha sanadkii 2015, iyada oo komishanku hubiyay intaan la sameynin diiwaangalinta in dhammaan qalabka iyo nidaamka loo marayo diiwaan galintu tahay mid sax ah, kuna habboon arligeena.
KDQ wuxuu 16/01/2016 waddanka ka bilaabay diiwaan galinta codbixiyayaasha oo casri ah lana sawiray bu’da isha (Iris) taas oo guul ku soo dhamaatay bishii September 2016 ka dib markii lixda gobal diiwaan galinta lagu qabtay.
KDQ wuxuu si guul ah u diiwaan galiyay dad ka badan 873,000 oo qof oo dhammaan darafayada JSL ku kala nool si ay codkooda u dhiibtaan.
KDQ waxa uu daabacay dhammaan kaadhadhkii muwaadiniinta is diiwaan galiyay ka dib markii sida uu dhigayo xeerka diiwaan galinta ee xeer Ln. 37/2007 laga saaray dhammaan wixii laba jeer iyo ka badan isku dayey in ay is diiwaan galiyaan (Duplicates).
29thApril 2017 ayaa KDQ bilaabay qaybinta kaadhahka muwaadiniinta is diiwaan galisay oo socotay ilaa 3rd 2017 iyada oo KDQ tagay goob kasta oo diiwaan galin laga sameeyey sanadkii 2016ka.
Guulaha laga Gaadhay Diiwaan galinta waxa ka mid ah:
In Nidaamka casriga ah ee bu’da isha (Iris) la sameeyo.
In waddanka intiisa badan la gaadhsiiyey, markii ugu horreysayna la gaadhay deegaano ay ka mid tahay Degmada Taleex.
In diiwaankani uu meesha ka saaryo xattooyada doorashada, ku celcelintii codeynta IWM.
Sidoo kale waxa halkaas hadalo ka soo jeediyay Komishaneer Cabdiraxmaan Cismaan iyo komishaneer Cabdifataax Ibraahim sheekh oo si wada jir ah uga hadlay qodobadan hoos ku xusan:
Diyaar garawga Doorashada
Labadii bilood ee u dembeeyey wuxuu KDQ ku waday diyaarinta hawlaha doorashada.
KDQ waxa uu dhameystiray Bixinta qandaraaska keenista iyo soo daabicida qalabkii Doorashada sida sanaaduuqda codbixinta, Warqada codbixinta iyo qalabka kale ee loo adeegsado codeynta.
KDQ Wuxuu dajiyey Qorshayaashii shaqo ee lagu maamuli lahaa Doorashada, kuwaas oo ah kuwo hufan isla markaasna Insha Alaahu waddanka u horseedi doona inay ka dhacdo doorasho xor iyo xallaal ahi, kuna dhacdo si nabadgalyo ah.
Komishanku waxa uu dajiyay jadwalkii shaqada ee qabsoomida doorashada 13/11/2017.
KDQ waxa uu gacanta ku hayaa qaarna dhameeyey siyaasadihii iyo hab-raacyadii lagu maamuli lahaa doorashada.
waxa hadda socda gabagabana ku dhaw wada tashiyadii xeerarka anshaxa xisbiyada siyaasadda iyo warbaahinta kala duwan ee doorashada, hawshan oo Insha Alaah dhawaan la saxeexi doono.
Waxa uu toddobaadyadan KDQ ku hawlan yahay kulamada kala duwan ee daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka.
Waxa dhawaan waddanka la keeni doonaa qalabkii doorashada.
KDQ wuxuu sida uu xeerku dhigayo 45 Maalmood ka hor maalinta doorshada sameyn doonaa Magacaabista Musharixiinta Xisbiyada Qaranka uga Qayb geli doona doorashada madaxtooyada.
KDQ wuxuu hadda gacanta ku hayaa tirinta iyo habaynta kaadhadhka ka soo noqday Gobollada waxaanu soo saari doonaa liiska kama dambayska ah ee codbixiyayaasha (FVT).
KDQ wuxuu diyaarin doonaa isaga oo la kaashanaya dhinacyo badan diyaarinta shaqaalaha ka hawl galaya doorashada oo tiro kumanaan ah, siina doono tabbabaro kala duwan.
KDQ wuxuu bilaabi doonaa Wacyi galinta codbixiyayaasha sida ugu habboona u soo dhigi doono.
Previous: Nin Maraykan Ah Oo Maxkamad Ka Hor Qirtay In Al-shabaab Tababbartay
Next: Wada-hadallo U Socday Guddiyo Khaatumo Iyo Somaliland Ah Oo Lagu Soo Gunaanaday Caynabo